Mkpuru osisi trimmer mgbe ị na-agbanye gas
Ndị na-egwupụta n'azụ ụlọ maara na trimmer bụ ihe bara uru nke ga-eme ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma na lawn ahụ ma ọ bụ kpochapụ ata ahụ site n'ókèala dị elu. Na, dịka usoro ọ bụla, ọ na-adazakarị n'ihi ụda dị iche iche. Otu n'ime mkpesa kachasị aka n'etiti ndị nwe ngwaọrụ bụ na trimmer na-ama ebe ị na-etinye gas. Anyị na-agwa anyị ka anyị ghọta isi ihe kpatara nke a ma chọpụta ụzọ isi dozie nsogbu ahụ.
Kedu ihe kpatara igbutu ntụpụ ụkwụ mgbe m na-agba gas?
O di nwute, ọnọdụ nke ụgbọ elu moto mgbe ị na-agbanye gas trimmer nwere ike ime n'ọtụtụ ọnọdụ. Ọtụtụ mgbe, "onye na-emerụ" nsogbu ahụ bụ carburetor. Nke a bụ ihe kachasị ihe mere trimmer ji kwụ. Dị ka a na-achị, nsogbu na-eme mgbe carburetor na-emezighị emezi, nke ga-ekwe omume mgbe nchekwa dị ogologo oge, mgbe ọ na-arụ ọrụ n'okpuru ọnọdụ ọjọọ, ibu dị arọ na engine. Ịmata "obi amamikpe" nke carburetor dị mfe na ọdịdị nke mmụgharị vibrating nke trimmer. Ọ bụrụ na ị nwere ahụike na-arụzi carburetor, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iji gbanwee onwe gị site na iji ntuziaka onye ọrụ. Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi karị iji nye nkọwa zuru ezu maka ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na ebe ọrụ.
Ihe ọzọ mere trimmer ji kwụ ọtọ mgbe ị na-enye gas nwere ike ịbụ mkpọchi na valvụ mmanụ, nke bụ ihe na-egbochi mmanụ ọkụ. Idozi nsogbu a dị mfe site na ike nke valvụ ahụ, mgbe e mesịrị, nnyefe nke gasoline na carburetor ga-ekwe omume.
Ọ bụrụ na enwere nsogbu yiri nke ahụ, ṅaa ntị na valvụ ego - breather. N'ịbanye na tank gas, valvụ elele anaghị ekwe ka ihe dị na tank. Ọ bụrụ na ikuku na-ehicha, ikuku adịghị agba, mmanụ ọkụ akwụsịkwara.
Ọtụtụ mgbe, ọ bụghị ịnweta ume, ebe ndị omebe na-ebu ibu. Nke a na - eme ma ọ bụrụ na eriri USB dị na carburetor adịghị ike ma na - agba egwu. Ọ na-erukwa na ụzụ na-achịkọta mmanụ na-arịwanye elu na-ebuwanye ibu, na-agba agba ma mesịa mebie. Ọ bụrụ na nsogbu a emee, ị ga-eji dochie ihe a.
Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere ọtụtụ ihe kpatara ndị trimmer nwere ike ịkwụsị mgbe ị na-agbanye gas. Ọ bụ ya mere ọ dị mkpa iji nyochaa ọnọdụ onye inyeaka gị, ka oge na-aga iji chọpụta ọnọdụ nke usoro niile.
Ncha na-ekpuchi ngwá ụlọ
Kedu otu esi ahọrọ onye irrigator maka ulo?
Kedu okpokoro frying ka mma?
Kedu otu esi edozi onwere onwe gi na satellite?
Igwe ọkụ dị ọkụ maka ụkwụ
Akwụkwọ akwa akwa akwụkwọ
Ihe mgbochi ink na-ehichapụ
Kedu otu esi ahọpụta ihe eji eme ụlọ ịwụ?
Ọ pụtara maka efere efere
Ọkụ ọkụ gas
Cod, gwoo na ude uto
Nwanyị na-elekọta nwa agbọghọ
Akara Dollar - mmeputakwa
Salad na anụ a na-ese siga
Kedu ihe iji halva?
Bra na "pushap" - gini ka ọ bụ?
Ọnọdụ okpomọkụ na nwata na-agba
Ifuru nke cineraria - peculiarities nke na-eto eto n'ụlọ
Ọgwụgwọ ọgwụ ọgwụ ovarian
Ebe nkiri na Brazil
Jiri eji aka gị na Ninja Turtle Costume
Achịcha na-eri na ọtụtụ
Slimming na mmiri
Akpụkpọ anụ na ịkpụ maka otu maka ụmụ ọhụrụ
Ụzọ ntanetị maka ụlọ obibi
A na-ebo Tom Ford ebubo na ọ na-agba ndị juri azụ